Mpifindra monina avy any atsimo: nisy nandrebireby ka voafitaka hoe hahazo fanampiana | NewsMada
Mpifindra monina avy any atsimo: nisy nandrebireby ka voafitaka hoe hahazo fanampiana
Lohahevitra lehibe nodinihina tamin’ny filankevitry ny minisitra, notontosaina tao amin’ny lapam-panjakana Iavoloha, omaly, ny mahakasika ireo mifindra monina avy any atsimo. Nivoaka tamin’izany noho ny fanisana natao fa misy mpianatra na mpila ravinahitra no niverina namonjy ny faritra nosafidiny honenana ka nitondra ny fianakaviany niala tany atsimo noho ny tahotra ny tsy fanjarian-tsakafo. Misy koa anefa ireo mpanararaotra na voarebireby ka nisy namitaka hahazo fanampiana.
Hisy ireo voamera manokana iraisan’ny minisitera isan-tokony, hatsangana ho fanampiana azy ireo sy ho fanarahana ny fipetrahany any amin’ny faritra nosafidiny, toy ny any avaratry ny Nosy sy ny any Bongolava, afaka mandray fianakaviana 1 200. Misy filana mpiasa manao asa tanana sy asa fambolena any Tsiroanimandidy ka izay vonona ny hamboly, azo omena ny “titre vert”. Tsy azo amidy na hanaovana sehatr’asa hafa ankoatra ny fambolena sy ny fiompiana kosa ny sombin-tany homena azy ireo.
Hafainganina ny fametrahana zara tany
Na maro aza ireo mandeha mila ravinahitra, tsy mahafoy ny tany nipoirany ireo mponina any amin’ny faritra atsimo, araka ny tatitra sosialy voaray. Hisy, araka izany, ny fanafainganana ny fametrahana ireo zara tany hambolena sy hiompiana, mirefy 1 000 m² isam-pianakaviana hatao ao Ifotaka. Natao hitazonana sy handrisihana ireo mijanona any amin’ny tany nihaviany hiaina ara-dalàna izany, sy hamerenana ireo niala sy voafitaka ihany koa.
Tsiahivina fa tsy vao izao, fa ny taona 2015 noho mankaty fotsiny, efa nahatratra 30%-n’ny mponina any amin’ireo kaominina vitsivitsy any atsimo ny nifindra monina namonjy ny faritra avaratra sy andrefan’ny Nosy. Miteraka olana fiarahamonina sy toekarena ho an’ireo faritra hifindra monina sy ny faritra nialana koa anefa izany.
Araka ny tatitry ny filankevitry ny minisitra ihany, horaisin’ny minisiteran’ny Mponina sy ireo tompon’andraikitra isan-tokony ny momba ireo mpifindra monina mandalo eto an-dRenivohitra ka lany vatsy. Efa natao amin’ireo tavela ao Fianarantsoa ihany izany.